ROM BIOS ma ọ bụ akpọkarị BIOS bụ ihe akụkụ nke a na kọmputa. Mgbe ọ bụla anyị na-atụgharị na kọmputa, ibido ọ na-egosi na ebe nchekwa ikike, nakwa na mberede ìhè nke Ọnụ Ọgụ mkpọchi glows, na e nwere a mkpọtụ ụda na ọgwụgwụ, mgbe nke anyị na-ahụ maara Windows Logo. N'ihi na a na kọmputa geek nke a bụ a nkịtị omume nke a na kọmputa exhibits mgbe ọ na-agbanwuru ha, na Otú ọ dị otu nwere ike ghara kwuru banyere ndị ọzọ na-abụghị nke ukwuu maara na kọmputa ngwaike, na ike ga-eji ya iji mezuo kwa ụbọchị aga-eme. Ha pụrụ ịnọgide na-eche, sị, ihe kpọmkwem na-eme mgbe kọmputa na-n'ezie agbanwuru. Ebe a na-abịa ọrụ na mkpa nke BIOS. Ọ bụ a mgbawa emi odude ke systemboard ma ọ bụ motherboard nke a na kọmputa. Ọ na-esetịpụ ihe ọmụma nile metụtara ngwaike nke kọmputa. E were i kwukwara ọhụrụ ike mbanye gị na kọmputa na-welie ohere, na na draịvụ ike na-agaghị na-achọpụtara ke BIOS. Ị ga-enwe ike iji na mbanye ozugbo ị nbanye Windows? Azịza ya bụ No, BIOS nwere ịchọpụta ike mbanye mbụ, ebe ọ na-esetịpụ ihe ọmụma nile metụtara ngwaike ntọala, na mgbe ahụ, ọ ga-ahụrụ site operating System.BIOS jide niile ozi metụtara ngwaike ntọala, usoro ụbọchị na oge . Ọ bụkwa ọrụ na-ebute Post nke bụ onwe-ego mere na usoro site n'onwe ya.
Part 1: Olee ịgbawa BIOS paswọọdụ
E nwere ụfọdụ manụ ndapụta ebe ị chọrọ ịgbanwe ụfọdụ ntọala BIOS na ị na-ahụ na ọ na-adịghị na-ewere paswọọdụ. I nwere ike a na ihuenyo dị ka nke a.
Nke a na-pụrụ ịbụ a dịruru ná njọ ebe ị zụta kọmputa n'ihi na onye ọzọ na-ere ákwà na enweghị BIOS paswọọdụ. Na-ekwe omume na onye ọzọ na-eji otu na kọmputa na emenịm dị iche iche paswọọdụ ke BIOS. Anyị na-na-agbalị na ihe kasị mma anyị guessed okwuntughe. Ma, mgbe ụfọdụ ime mgbalị na-ọ bụghị na-arụ ọrụ, mgbe ahụ, na-eme ihe? Ọ bụrụ na m apụghị ịbanye BIOS na pụtara m merie '-enwe ike ime ihe ọ bụla mgbanwe na ntọala.
Na ikpe anyị nwere agbaji BIOS paswọọdụ .E ụzọ dị iche iche na ịgbawa BIOS paswọọdụ. Ụfọdụ nzọụkwụ na-nyere n'okpuru:
Mbụ nhọrọ ga-ịgbanwe paswọọdụ i papuas Ntọala na BIOS. E nwere kpọmkwem i papuas na motherboard nke a pụtara maka nke a. Otú ọ dị ọ bụ ihe amamihe na-agụ ngwaahịa ntuziaka mbụ tupu agbalị a nzọụkwụ, n'ihi na ọnọdụ nke i papuas ga-iche site na otu motherboard ọzọ.
Ịrụ a onye nwere ka gbanyụọ kọmputa, jide n'aka na ike USB bụ nke mgbidi outlet.Unsrew kposara emi odude ke Akụkụ Panel nke CPU.
N'otu oge, ị na-eme, mata na ọnọdụ nke BIOS i papuas na motherboard site n'inyocha na ngwaahịa akwụkwọ na tọgharịa otu ihe ahụ.
The i papuas nwere ike kpọrọ dị ka CLEARCMOS ma ọ bụ JCMOS1.However ndị kasị mma ga-abụ mgbe nile na-ezo aka ngwaahịa akwụkwọ.
Ozugbo a mere, Malitegharịa ekwentị ahụ na kọmputa na ego ma paswọọdụ na-ekpocha ma ọ bụ. Ugbu a ozugbo paswọọdụ na-ekpocha, gbanyụọ kọmputa otu ugboro ọzọ, na-etinye azụ i papuas akpasarade itie.
Ọ bụrụ na ndị mbụ usoro adịghị ọrụ, i nwere ike na-agbalị backdoor ntinye. Bụrụ na nke desktọọpụ a nwere na-arụzu site ịlele ahụ CMOS i papuas.
N'ihi na laptọọpụ ọrụ:
N'ihi na laptọọpụ ọrụ usoro ga-kpamkpam dị iche iche, ebe ọ bụ na ha nwere iji backdoor paswọọdụ ntinye nhọrọ. Tinye ọjọọ paswọọdụ thrice na ihuenyo, nke ga-egosi ihe njehie ka nke a.
Detuo koodu nke a na-egosipụta. Na mgbe ahụ a BIOS paswọọdụ esi ngwá ọrụ dị ka saịtị a: http://bios-pw.org/ Tinye egosipụta koodu na mgbe ahụ paswọọdụ ga-site na nkeji ole na ole.
Part 2: Olee otú uzo BIOS paswọọdụ
Ọzọ ọnọdụ yiri nke ndapụta anyị tụlere n'elu nwere ike edozi site gafere ọtụtụ BIOS paswọọdụ. The ụzọ nke ike-eji ebe ahụ yiri ụzọ mee ihe na aga ndapụta. Na mgbakwunye na nke ahụ, anyị nwere ike iji ndị abụọ ụzọ nakwa:
Usoro: Overloading keyboard echekwa
Usoro a bụ kpọmkwem ka ụfọdụ nke usoro ihe ochie mbadamba, na ọ bụ nnọọ ihe kwere omume na ọhụrụ usoro nwere ike ọ gaghị enwe ike mejuputa a. Nke a na-eme site booting usoro-enweghị òké ma ọ bụ keyboard, ma ọ bụ na ụfọdụ BIOS architectures, ọ pụrụ arụ ọrụ site ọkụkụ ESC isi na ngwa ngwa inwe.
Nkebi nke 3: Olee otú iji tọgharịa paswọọdụ BIOS
Ọ bụrụ na ị gbalịrị ịgbawa BIOS paswọọdụ na ọ na-adịghị arụ ọrụ maka gị, ị pụrụ tọgharịa BIOS paswọọdụ ikekwe.
Usoro 1: Wepụ CMOS batrị
Nzọụkwụ 1: Chọpụta CMOS batrị.
CMOS batrị ga-abụ nke esisịt gburugburu udi. CMOS bụ ihe akụkụ nke System osisi BIOS, na ndị niile na motherboards ga-a CMOS batrị. Ọ dị mfe iji mata na motherboard, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ gburugburu, esisịt na mkpụrụ ego ekara. Ọ na-echekwa na BIOS ntọala nke na-agụnye isi ngwaike ntọala, ụbọchị, oge, na ndị ọzọ na usoro ọmụma. Iji wepu CMOS batrị, apụ usoro nwere na-agbanyụrịrị, na kwa jide n'aka na ike USB na-mgbagwoju.
Nzọụkwụ 2: Wepụ na-etinye azụ batrị
Ozugbo usoro a na kpamkpam agbanyụrịrị wepụ CMOS batrị. Chere maka 15-20 nkeji. Etinye azụ CMOS batrị na-atụgharị na usoro.
Nzọụkwụ 3: Tọgharia paswọọdụ
Mgbe nzọụkwụ 2 na-mere ị nwere ike uzo BIOS paswọọdụ na nwere ike nbanye gị na kọmputa ọma. Rịba ama na ị nwere ike itinye ọhụrụ paswọọdụ ọzọ si na BIOS. Ọ bụrụ na ị na-echefu paswọọdụ ọzọ Mgbe ahụ nọgide nzọụkwụ 1 na nke 2 iji tọgharịa paswọọdụ.
Method 2: Gbaa a iwu si MS-Dos ozugbo
Usoro a na-arụ ọrụ naanị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnweta arụnyere Operating System. Ozugbo anyị nbanye anyị desktọọpụ anyị nwere na-agba ọsọ MS-Dos omume, na e kpere-esonụ iwu ke otu iji dị ka ọ na-egosi ebe a:
Iwu a resets BIOS ntọala nke na-agụnye BIOS paswọọdụ dị ka mma. Usoro a na-emezu site na iji Debug ngwá ọrụ si MS-Dos.
Method 3: Iji Nke atọ Party Software
Taa, e nwere nza nke atọ akụkụ software dị, nke nwere ike tọgharịa BIOS paswọọdụ ma ohere ka sistemụ bụ mkpa. Ụfọdụ n'ime ewu BIOS paswọọdụ cracking software na-eji dị ka CmosPwd na Kioskea
Method 4: Iji backdoor BIOS paswọọdụ
Backdoor BIOS paswọọdụ bụ a set nke okwuntughe, nke bụ nna ukwu okwuntughe nyere site BIOS ere. Ndị a okwuntughe na-ọnyà, ha na-kpọmkwem ka na-emepụta. Na ndị ọzọ okwu niile emepụta ịnọgide na-enwe a set nke nna ukwu okwuntughe nke ike-eji irrespective nke ihe ọ bụla paswọọdụ onye ọrụ ahụ setịpụrụ. Ndị a okwuntughe na-adịghị nnọọ ike na-enweta site na pụrụ n'ụzọ dị mfe enweta site na emeputa website.
> Resource> iOS> ụzọ atọ ịgbawa BIOS Paswọdu